မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: January 2012
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအစီအစဉ်က ပြုလုပ်တဲ့ Gathering Party
တာရာဝေယံ။ ရန်ကုန်၊ ၃၁၊ဇန်န၀ါရီ၊၂ဝ၁၂
ဒီနေ့ညနေက ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းလျားလမ်းမှာရှိတဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြည်ဥယျာဉ် မြက်ခင်းပြင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအစီအစဉ်က ပြုလုပ်တဲ့ Gathering Party မှာ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က သရက်ထောင်မှာ တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုသန်းဇော်ရဲ့စာ သူ့ဆီကို မကြာမီကမှ ရောက်လာကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ မလွတ်မြောက်သေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Gathering Party ကို ဒီနေ့ညနေ ၅းဝဝ နာရီမှ ၈းဝဝနာရီအထိ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲကို Self-help program,Yangon by Ex-political prisoner က ဦးစီး ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဌေြးွကွယ် အပါအဝင် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုစည်သူမောင် စတဲ့ ဗကသအဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တော်များ၊ သတင်းမီဒီယာများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားမှာ ဗကသအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပွဲစီစဉ်သူများ၊ ကိုရဲလွင်၊ ကိုနေဝင်း၊ လင်းလင်း အစရှိတဲ့ အနုပညာရှင်များက ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို တေးသီချင်းများနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ သရက်ထောင်ထဲမှာ ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ညီမဖြစ်သူ မသန္တာ၊ ဗကသအဖွဲ့ဝင်များ၊ GW အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူ သီဆိုပြခဲ့ပါတယ်။
ပွဲစီစဉ်သူများက မြစ်ဆုံဒေသမပျက်စီးမီက ဓာတ်ပုံကို ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များထံပေးအပ်ခဲ့ရာ ကိုကိုကြီးက ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ရပုံကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း၊ ဗကသ သီချင်းများသီဆိုခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်စေရန်အတွက် အင်းလျားရေပြင်မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးများမျှောပြီး ဆုတောင်းကာ အခမ်းအနားကို ဝမ်းသာခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းများနဲ့ ည ၈းဝဝနာရီမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by MoeMaKa at 8:48 PM0comments
ကောင်းကင်ပြုံးမယ့် နိဂုံးကိုလိုချင်တယ် မေမေ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၂
ဘဝနှစ်ဆစ်ချိုးပြီး ဖြစ်သလိုပစ်တင်ထားခဲ့ရပြန်ပြီ မေမေ…
စာသင်လို့မရနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းတခုပဲမဟုတ်လား မေမေ…
မာတိကာအဖြစ် စွန်းထင်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြပေါ့ မေမေ….
ကျနော်တို့ချင်းကတော့ အမှန်အကန်ဝေးခဲ့ကြပါတယ် မေမေ…
ကမ္ဘာကြီး ရွာဖြစ်သွားတဲ့ စစ်အေးကာလမှာ
ကျနော်တို့စစ်ပွဲတွေက ပူလောင်ဆဲပေါ့ မေမေ….
နိဒါန်းအဖြစ် အကျွမ်းတဝင်ကျန်ရစ်ဆဲပါ မေမေ…..
မဆုံးနိုင်တဲ့ စာကိုယ်အဖြစ် လမ်းလွှဲပစ်ခဲ့ပါတယ် မေမေ
အပြစ်မဲ့ကလေးတွေရဲ့ရင်ဘတ် မိဘမဲ့တံဆိပ်ကပ်ခဲ့ပါတယ် မေမေ….
မိဘမဲ့ကလေးတွေ ငိုနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
တေးကဗျာတွေ မဆိုချင်ခဲ့ပါဘူး မေမေ…
ငတ်မွတ်ခြင်းတွေ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ လူမသိသူမသိ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
ဘတ်ဒေးကိတ်တလုံးကို ခပ်ပြုံးပြုံးမလှီးချင်ခဲ့ပါဘူး မေမေ….
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပေါင်မုန့်တလုံးလိုခွဲတမ်းချနေကြတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
ယုံကြည်ချက်ကို ကြိုတင်လက်မှတ်မဖြတ်ချင်ခဲ့ပါဘူး မေမေ….
အလင်းရောင်သီချင်းကို မေမေ့ချစ်ခြင်းဟာမိုနီနဲ့ဆိုချင်ခဲ့သူပါ မေမေ…..
ကောင်းကင်ပြုံးမယ့်နိဂုံးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပါ မေမေ…..။ ။
(ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ ၄၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ကိုယ်ပိုင်မွေးနေ့အမှတ်တရ)
Posted by Aung Htet at 4:23 PM0comments
Interview with U Awbatha on 2007 Saffron Movements
ဆရာတော်ဦးသြဘာသ၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်း
စီစဉ်တက်ဆက်သူ - အရှင်ပညာနန္ဒ၊ သာသနဥသျှောင်အဖွဲ့၊ နယူးယောက်၊
(အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၁ တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်)
Posted by MoeMaKa at 3:20 PM0comments
Labels: VDO News
Zarganar and Collegues arrived DC
ဇာဝါရီ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၂
ကမ္ဘာကျော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာ ခေါ် မောင်သူရ၊ ကချင်အရေး နိုးကြားလှုံ့ဆော်နေသူနဲ့ (NDF) ပါတီဝင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးရေးရာ နိုးကြားလှုံ့ဆော်သူ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ ဝေဟင်ခရီးနဲ့ ထိုင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံများမှတဆင့် ဝါရှင်တန်မြို့ တော် Dulles နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၉း၃၀ အချိန်မှာ ချောချောမောမော ရောက်ရှိလာကြတယ်။
သူတို့တတွေကို ဝါရှင်တန်မြို့ တော်အခြေစိုက် US Campaign for Burma အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုအောင်ဒင်၊ National Endowment for Democracy မှ မြန်မာ့အရေး တာဝန်ခံ ကိုအောင်မော်ဇင်၊ ဝါရှင်တန် ကွန်မြူနီတီမိသားစုအဖွဲ့ဝင် ကိုထွန်းထွန်း၊ ကိုအာယု (ကိုဇာဂနာ ညီဝမ်းကွဲ) နဲ့ ကိုဇော်ဇော် တို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ကြိုဆိုကြပါတယ်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ (Radio Free Asia) မြန်မာသတင်းဌာနမှ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းသတင်း လာရောက်ရယူတာကို တွေ့ရတယ်။
ဝါရှင်တန်ရဲ့  အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီဥတုက ဒီနေ့မှာ ထူးထူးကဲကဲ နွေးထွေးနေပြီး ကိုဇာဂနာ က ပြောင်နေတဲ့ သူ့ခေါင်းကို ခေါင်းစွပ်ဝတ်၊ ခေါင်းမြီးခြုံ နေရမယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ အခုတော့ အေးဆေးပဲလို့ ပြောပြီး ဝါရှင်တန်မြို့ တော်ကြီး နဲ့ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါကြောင်း။ မကြာခင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွါခဲ့ရတဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေ၊ မိသားစုများနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမှာကို အထူး ဝမ်းမြောက်စွာ မျှော်လင့်နေကြောင်း။
ဝါရှင်တန်မြို့ တော်တဝိုက်နေ မြန်မာမိသားစုနဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ ညနေ စကားပြောပွဲ မတိုင်ခင် USCB နဲ့ NED တို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အထက်/အောက်လွှတ်တော်၊ ဒီမိုကရေစီလှုံဆော်ရေးအဖွဲ့ စတဲ့ နေရာများမှာ နေစဉ်ရက်ဆက် မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာများကို သူတို့သုံးဖော် (three musketeers) တို့ ကနဦး ဆွေးနွေးတင်ပြသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ သက်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြော၊ ထမင်းစားပွဲတက်စတဲ့ ကိစ္စအဝဝပြီးမှ New York နဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်း LA, San Francisco တို့ကို ခရီးဆက်ပြီး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စကားသဝဏ်လွှာ ပါလိုက်ပါတယ်။
မိုးမခက တယ်လီဖုံးနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ယခု ဟီလတန်ဟိုတယ်မှာ တည်းနေကြောင်း၊ အမေရိကန်အင်တာနက် သုံးဖို့ကြိုးစားတာ ဟိုတယ်က တရက်ကို ၉.၉၉ ဒေါ်လာကောက်နေတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာကွန်မြူနီတီ ပေါင်းစုံနဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် တွေ့ဆုံသွားမယ်။ မိတ်ဆွေတွေ အားလုံး၊ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို နှုတ်ဆက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
(မိုးမခ မှတ်ချက် - မိုးမခရဲ့အထောက်တော်ဇာဝရီက ၀ါရှင်တန် မေရီလင်းက သတင်းရေးသားရာမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ ကတုံးကြီးလို့ ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ )
Posted by MoeMaKa at 2:12 PM0comments
Posted by Aung Htet at 8:27 AM0comments
Posted by Aung Htet at 5:26 AM0comments
Posted by Moemaka at 5:10 AM0comments
Posted by MoeMaKa at 1:11 AM2comments
"ပုံမှာပါတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နံဘေးက မောင်မြင့်ထူးဟာ တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း လက်ထက်မှာ အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ဖီဆန်တဲ့ အဖေတူသား ဗိုလ်မှူးဗထူးရဲ့ သား ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးဟာ ရေကြည်အိုင် ဖက်ဆစ်အကျဥိးစခန်းထဲမှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်" ဟု ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်က ရေးထားသည်။
"အဲဒီ သမိုင်းတွေကို နောက်လာနောင်သားတွေ အတုယူသင့်ပါတယ်။ အဖေရော သားပါ နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့ကြတဲ့ ထားဝယ်သားတွေ တကယ့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ အားလုံးကို အလေးအမြတ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်" ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်မှူးဗထူး၏သား ရေကြည်အိုင်တွင် ကွယ်လွန်သည်ဟူသော အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်အတွင်းရေးများကို ဖွင့်ချနေသည့် "စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား" အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://photayokeking.blogspot.com/2009/03/blog-post_4306.html တွင်လည်း တွေ့ရသည်။
ထိုစခန်းတွင် စစ်ကြောခံရစဉ် ဒုက္ခိတဖြစ်သွားသူ၊ သေဆုံးသူ အများအပြား ရှိသော်လည်း ထိုအကြောင်းအရာတို့ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖွင့်ချမှုများ မရှိသေးပေ။ထားဝယ်သား တစ်ဦးက ဗိုလ်မှူးဗထူး၏သား ပါဝင်သော ယင်းဓာတ်ပုံကို သိမ်းဆည်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Moemaka at 5:41 PM 1 comments
To post to this group, send email to moemaka@googlegroups.com
Posted by Mr Htay Tint at 11:59 PM0comments
မိုးသီး အမိန့် ကို ဆက်လက်နာခံသင့် မသင့် အနှစ် ၂၀ေ...
ပြန်စာ မလာတာ ၂ နှစ်ရှိနေပြီ ။
မိုးသီး အမိန့် လား လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်း
ဦးခင်ညွန့်ဆိုသော အာဏာရှင်ဟောင်းသို့ 